ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး ၏ နောက်ဆုံး နေ့ များ | The FNG
ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး ၏ နောက်ဆုံး နေ့ များ
November 25, 2010 · by 21 South News	· in (unnamed), သတင်း ဆောင်းပါး, News.	·
The Last Days of Senior Drug lord by Tin Kyaw Kyaw Soe
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊မြန်မာ ပြည်သူ လူထု
တစ်ရပ် လုံးက နိုင်ငံရေး အပြောင်း အလဲ ကို အာရုံ
စိုက်နေ ချိန် တွင် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသော စီးပွားရေး
အင်ပါယာ နှစ် ခု ၏ အရှင် သခင် နှစ်ဦး ၏ တိုက်ပွဲ များ
က ပြင်းထန်လွန်းလှ သည် ဟု ရန်ကုန် မြို့ မှာ နာမည်
ကျော် ခရီးသွား ဧဂျင်စီ တစ်ခု ၏ အကြီးအကဲ တစ်ဦး
ဖြစ်သူက FreedomNews Group သို့ ပြောသည်။
ဦးတေဇ ဟု လူသည့် များသည် စစ်ခေါင်းဆောင်
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ၏ သမက် သည် လော်စစ်ဟန်
ဟု လူသည့်များ သည့် ဘိန်း ဘုရင် အို ကြီး
၏ စီးပွားရေး အင်ပါယာ ကို
အလုံး အရင်း ဖြစ် နယ်ချဲ့ နေသည်မှာ ယမ်းငွေ့ မထွက် သော မြို့ပြ စစ်ပွဲ တစ်ခု ပင် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် မြို့ သံလျှင် ရှိ သီလ၀ါ ကုန်သေတ္တာ ဆိပ်ကမ်း၊ကမ်းလွန် ရေနံ လုပ်ကွက် တစ်ချို့ ၊ Asia World
ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်များ ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း နှင့် ရန်ကုန် လေကြောင်းလိုင်း အပြင်
အခြား လူသိသိပ် မများ သေးသည့် စီးပွားရေ လုပ်ငန်း များ ကို ပိုင် ဆိုင်သည့် လော်စစ်ဟန် နှင့်
သားဖြစ်သူ စတီဗင် လော် တို့ ၏ စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းများ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး တို့ မိသားစု ၏ မျက်စေ့ကျ ခြင်း ကို ခံနေရပြီ
လော်စစ်ဟန် ရော ဦးတေဇ နှစ်ဦး စလုံး ပါ ၎င်း တို့ ပိုင်ဆိုင် ထားသည့် ဓန ဥစ္စာများ သည် တရား မ၀င်သလို
၎င်းတို့ နှစ်ဦး စလုံး၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများမှာ လည်း အနောက် နိုင်ငံများ က ဓာတ်ခတ် ပိတ် ဆို့ ထားမှု ခံရသည်။
တူညီသည် မှာ ၎င်းတို့ နှစ်ဦး စလုံး ၏ စီးပွားရေး လည်ပတ် ရှင်သန် ရာအတွက် ငွေမည်းမှ ငွေဖြူ အဖြစ်
ခ၀ါ ချမှု သည် စင်္ကာပူ ဘဏ် များ မှ တစ်ဆင့် လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာငွေ ပေးငွေ ယူရှင်းတမ်းများ
မှာ လည်း အဆိုပါ ဘဏ်များ မှ ပင် စီစဉ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဒဏ်ခတ် ထားပါလျှက် ချင်း အတူ အနောက်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပ တိုက် သားများက Air Bagan ကို မရွေးချယ်
ပဲ Yangon Airways ကိုရွေးချယ် ခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး၏ သမက်တော် အတွက် မျက်စေ့ စပါးမွေး ဆူး
စရာ ဖြစ်လာသည် မှာ ဧကန် မလွဲ ပင် …
Asia World လုပ်ငန်းစုကြီး ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်သည့် လော်စစ်ဟန် ၏
သား ဖြစ်သူ စတီဗင်လော မှာ ရှမ်း အရှေ့ မြောက်မှာ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အားထောင်ထား ခြားနားနေသူ များ အား စာနာ
မှုရရှိသည် ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီး နောက် ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး တို့ သားအဖ မှာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိအားပေး
ခံနေရသည် ဟု FNG ၏ စုံစမ်း မှုများ မှ သိရှိရသည်။ထို့ ပြင် အနှီ ဘိန်း ဘုရင် အို ကြီးသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်က
ရာထူးမှာ ဖယ်ရှား ခံရသည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဟောင်း များ ကို လည်း အကြင်နာ ပိုသေးသည် ဟု
သိရသည်။ ဤသည် မှာ ဖြစ်နိုင် သည့် သာဓက တစ်ခု မှာ စစ်ထောက်လှမ်း ရေး အကြီး အကဲ ဟောင်း
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် က ၀ရမ်းပြေး လော်စစ်ဟန် ဘ၀ ကို ပြည်ဖုံးကား ချပြီး ရန်ကုန် တွင်
လူတစ်ဦး သူ တစ်လုံး ဖြစ် စေခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
နိုင်ငံတကာ အတွေ့ အကြုံ ရှိသောထို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် နှစ်ဦးမှာ အနာဂတ် တွင် သပိတ်ဝင်
အိတ်ဝင် ဖြစ်မည့် လေကြောင်း ပို့ ဆောင်ရေး နယ်ပယ် တွင် ပိုပြီး ပြိုင်ဆိုင် မှု ပြင်းထန်လာသည် မှာ နိုင်ငံခြားခရီး
သွားများ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ပိုမို လည် ပတ်လာချိန် တွင် ဖြစ်သည် ဟု မန္တလေး မြို့ မှ ခရီးသွားလာရေး ဧဂျင်
စီ တစ်ခု မှ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ကပြောသည်။
“မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ကမ္ဘာ လှည့် တွေ ပိုလာတော့ မယ်။ ဒီဈေး ကွက် ကို Air Bagan က လက်ဝါးကြီး
အုပ်ထားချင်တယ်။ Air Bagan က သူ့ နောက် မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး တို့ မိသားစု ရှိတော့ Yangon Airway
က ဘာပြန် လုပ် နိုင်မှာ လဲ ဟု သူကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ဈေးကွက် တွင် နာမည် ကြီးပြီး ဟန်းဆက် မော်ဒယ် နိမ့် ကလေး တစ်လုံးဖြင့်
တစ်နေ့ သိန်းရာချီ မြတ်နေ သူ တစ်ဦးက “နအဖ က ပြောပြီး သားလေး စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းများ တိုင်းရင်း
သား တွေ လက်ဝယ်ရောက်ရေး ဆိုတာ လော်စစ်ဟန် က တိုင်းရင်းသား မှ မဟုတ်တာ တရုတ် စစ်စစ်ကြီး
မြန်မာ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ဟောင်း တစ် ကမူ “စစ်တပ် က အလို ကြီးထွား လာမယ့် ကိစ္စတွေ
သူတို့ ကို ပခုံးချင်းယှဉ် မယ့် ကိစ္စတွေ ဆို ဘယ်တော့ မှ အလှ ကြည့်နေတာ မဟုတ် ဘူး” ဟု သူ၏
အတွေ့ အကြုံ နှင့် ယှဉ် ၍ ပြောပြသည်။
မည်သို့ ပင် ဆိုစေကာမူ ခရီးသွားရာသီ ဖြစ်သည့် အတွက် Yangon Airways ရပ်တန့် ခြင်းမှာ သတင်း
ကောင်း တစ်ခု တော့ မဟုတ်ချေ။ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ လာရောက်လည် ပတ်သည့် ခရီးသွား အများစုမှာ
ဒေသတွင်း နိုင်ငံ များ သို့ ပါ တစ်ဆက်စပ်တည်း သွားရောက် လည်ပတ် သူများ ဖြစ်သောကြောင့်
Yangon Airways ခရီးစဉ် ရပ်တန့် ခြင်းသည် နိုင်ငံ ၏ အရှိန် ရလာခါစ ကမ္ဘာ လှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း
ကို ပါ နစ် နေစနိုင်သည်။
ရန်ကုန် မြို့ ရှိ Travel & Tours ဧဂျင်စီ တစ်ခု မှ တာဝန်ရှိ သူ တစ်ဦးက ခရီးသွားအေ့ဂျင်စီတွေ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအတွက်ဒီဇင်ဘာလမှာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်း
လိုင်းခရီးစဉ်အတွက် တိုးအော်ပရေတာတွေ အသဲအသန် လုပ်နေရတယ် ဟု ပြောသည်။
Freedom News Group မှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည် မှာ Asia World လုပ်ငန်းစုကြီး ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များ ကို
မျက်စေ့ ကျနေသည် မှာ ဦးတေဇ တစ်ယောက် တော့ မဟုတ်ပဲ စစ်တပ် ၏ စီးပွားရေး ဦးပိုင် နှင့်
Max Myanmar Zaw Zaw တို့ လည်း ပါဝင်သည်။ Asia World ဆိပ်ကမ်း နှင့် အနီး အနား တွင်
ထူး ၊ Max Myanmar နှင့် စီးပွားရေး ဦးပိုင် တို့ က မြေကွက် များ ထပ်မံ ယူထားပြီး Asia World
နှင့် အပြိုင် သီလ၀ါသင်္ဘောဆိပ်များ ၊ Container Plant များ ထပ်မံ ဖောက်လုပ်နေကြခြင်းသည်
ခောတ်ပျက် သူဌေး သစ်ကလေးများက၊ စိန်စီထား သော ရွှေ သေနတ် နှစ် လက် ကို မော်တော်ကား
ထဲတွင် တစ်လက် ခေါင်းအုံး အောက်တွင် တစ်လက် အဆင်သင့် ဆောင်ထားလေ့ရှိသည့်
ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး ကို စီးပွားရေးအံတု ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။
ထူး ထရေး ဒင်း မှ အကြီးတန်း အရာ ရှိ တစ်ဦး က FNG သို့ ပြောရာတွင် သူ၏ သူဌေးသည် “ယောက္ခမတော်
ကြီး ဘ၀ တစ်ပါး မပြောင်း ခင် သူ နှင့် အဓိက စီးပွား ပြိုင် ဘက် ဖြစ်နေသည့် ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး ကို
တတိယ တန်း စီးပွားရေး ကလပ် တစ်ခု သို့ တန်းဆင်း ကစား သွားသည် မြင်ချင် နေပုံရသည်မှာ
အသေအချာ ပင် ဖြစ်သည်။
← ဗြိတိန်တွင် ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြမှု ပို့ ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးများ ပြတ်တောက်
စစ်အစိုးရ ယိုးစွပ် ဗုံးတရား ခံ ဓာတ်ပုံ အင်တာနက် ဆိုင်များ မကပ်မနေရ →
5 responses to “ဘိန်းဘုရင် အိုကြီး ၏ နောက်ဆုံး နေ့ များ”
ကျော်စွာ November 29, 2010 at 5:34 pm · ·
ဒီသတင်းကို ဘယ်ကရသလဲတော့ မသိပါဘူး။ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့နည်းနည်းလွဲနေတယ်။ အေရှားဝေါလ်ကို လော်စစ်ဟန်ရဲ့သားမြေးတွေ ပိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝမှန်ပါတယ်။ လော်စစ်ဟန်မိသားစုဆိုတာက ဦးသန်းရွှေငယ်ဘ၀ ရှေ့တန်းမှာ ငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်တွေတုန်းက ကျွေးမွေးထားတဲ့ ကျေးဇူးတွေ အတော်ရှိခဲ့တဲ့ မိသားစုဗျ။ နောက်တစ်ယောက် ရှိသေးတယ် လားစိုးမြင့်ဆိုတာ။ သူတို့တွေက ရှေ့တန်းမှာ မစားရမသောက်ရနဲ့ ငတ်ပြတ်နေတဲ့ စစ်တပ်တွေကို ဘိန်းကုန်ကူးရင်း ရိက္ခာလေးတွေ ၀င်ဝင်ပေးတတ်ကြတယ်။ ငွေကြေးလေးတွေ ထောက်ပံ့လေ့ရှိကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဘိန်းဘုရင်တွေနဲ့ လက်ရှိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ တစ်ဦးကမေတ္တာ တစ်ဦးက စေတနာဆိုပြီး ရှိခဲ့ကြတာပေါ့။
အဲဒီ တပ်မတော်အရာရှိတွေ ရာထူးတက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကို မြို့ပေါ်ကို တရားဝင် လာရောက်နေထိုင်စေပြီး ဘိန်းကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စီးပွားရေးတွေကို လုပ်ကိုင်စေခဲ့တယ်။ အေးရှားဝေါလ်ဆိုတာ အဲလိုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင်း အကြီးအကျယ်ချမ်းသာလာတာပေါ့။ ဆိပ်ကမ်းကြီးတွေ၊ လမ်းတွေ၊ ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်တွေ အားလုံးနီးပါးကို တည်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့။ သူတို့တွေကလည်း ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အရင်ကလိုပဲ ပေးမြဲပေးကြတာမို့ ဦးသန်းရွှေ မိသားစုက မျက်စောင်းထိုးတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့ သတင်းပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်အားလုံးကို အေးရှားဝေါလ်က ၉၀ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်ခွင့် လိုင်စင်ရထားပါတယ်။ သတင်းစာ နေ့တိုင်းဖတ်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ထပ်ဆောက်မယ့် နေပြည်တော် လေဆိပ်ကြီးတောင် အေးရှားဝေါလ်ကိုပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါက ထားပါတော့။
သတင်းထဲမှာပါတဲ့ ဦးတေဇဆိုတာနဲ့ ရန်ကုန်အဲဝေးဆိုတာကို ပြောပါဦးမယ်။ ဦးတေဇဆိုတာက ၁၉၉၈နောက်ပိုင်းမှာ သစ်လုပ်ငန်းကနေ တက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှာမှ ဦးသန်းရွှေတို့အဆင့်ထိ တက်လှမ်းလာပြီး လုပ်ငန်းပါမစ်တွေ ရလာတဲ့ န၀တ သူဌေးများထဲက တစ်ယောက်ပါပဲ။ သူဘယ်လောက် ချမ်းသာချမ်းသာ အေးရှားဝေါလ်ကိုတော့ မမီပါဘူး။ ဟိုက သူ့ထက် သုံးဆလောက် ပိုချမ်းသာပါသဗျား။ အဲ.. ရန်ကုန်အဲဝေးဆိုတာကတော့ ၀သွေးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ တချိန်က ဗကပတပ်မှူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့ ပေါက်ယူချန်ရဲ့ သားမက် အိုက်ဟောက် ပိုင်တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းပါ။ ၀တပ်နဲ့ လော်စစ်ဟန်က အတော်ဝေးတာကို ဒီလောက်ဆို ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ရန်ကုန်အဲဝေးကို အပိတ်ခံရတာဟာ လော်စစ်ဟန်စီးပွားရေးကို ဦးသန်းရွှေက မျက်စောင်းထိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တပ်တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်မှာလား မြို့ပေါ်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အားလုံး အပိတ်ခံမှာလားလို့ စစ်အစိုးရက ရာဇသံပေးလိုက်တာပါ။ လက်ရှိလည်း ၀တပ်ကို တိုက်ဖို့ စစ်အစိုးရရဲ့ တပ်တွေ အမြောက်အမြား ရွှေ့တာပြောင်းတာတွေ လုပ်နေပါတယ်။
မဆီမဆိုင်တော့ အတော်လေး လျှာရှည်ပြီးသွားပြီ။ ရန်ကုန်အဲဝေးအပိတ်ခံရတာဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအပေါ် စစ်အစိုးရရဲ့ ကတိမတည်မှုသာဖြစ်ပါကြောင်း အများသိစေရန် ဒီနေရာကနေ လမ်းကြုံဝင်လို့ ကြော်ငြာမောင်းထုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
သျှိုင်းယျံန်အောင် November 26, 2010 at 9:07 pm · ·
ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ မကောင်းတာမှန်ပါတရ်။ဒါပေ
မရ့် ဘု၇ားမြ့ကိုက်။ဘု၇င်မြ့ကိုက်ဘ၇်ဘာသာတရားမှလက်မခံတဲ့ (မူးယစ်ဆး)
ကုန်သည်နဲ့ သမ္မာအာဇီဝလုက်တဲ့ သူနဲ့ (သဘောပြောတာနော်)နဲနဲလေးကွာဟမှုရှိ
ag November 26, 2010 at 10:17 am · ·
ကောင်းတယ်ဗျာ။သူတို့ချင်း စားခွက်လုတာ။ဒါပေမယ့် ဥတုရွေးတဲ့မြို့ ကလူတွေကတော့သနားစရာပေါ့။
leokoko19@gmail.com November 25, 2010 at 9:37 pm · ·
ARAKANသားမျိုး၇ိုဟင်ဂျာကျော်သူအေဂျာစ် November 25, 2010 at 6:38 pm · ·
ကို တ၇ုတ်ကြီးတော. စိတ်မကောင်း စ၇ာပဲ..
တခါတော. တခြားတယောက်ကို ဒုခ်ကပေးခဲ.တယ်ဆိုတော.
အခုတော. ကို တ၇ုတ်ကြိးအလှည်.ပေါ.